बढ्दै स्क्रब टाइफसका बिरामी- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ७, २०७८ शंकर आचार्य
पर्सा — जिल्लामा स्क्रब टाइफसका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । अस्पताल तथा क्लिनिकहरुमा पनि यसका बिरामी आउन थालेका छन् ।
नारायणी अस्पतालका चिकित्सक फिजिसियन डा. जेपी जैसवालले सातामा १० देखि १२ जनासम्म स्क्रब टाइफसका बिरामी आफ्नो सम्पर्कमा आइरहेको बताए । ‘पर्सा जिल्लाबाट मात्र नभई छिमेकी बारा, रौतहट र सर्लाही सम्मबाट बिरामी आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘गत साता सम्पर्कमा आएका ५ बिरामीमध्ये २/२ सर्लाही र रौतहटका र १ वीरगन्जका थिए, अस्पताल र क्लिनिक दुवैमा गरी बिरामी सम्पर्कमा आइरहेका छन् ।’ वर्षायाम पछि पानी जमेर यो रोग सार्ने भुसुना बढेर पनि रोगीको संख्या बढेको हुन सक्ने उनले बताए ।
तराई अस्पतालका चिकित्सक डा. अतिन्द्र मिश्रले दसैंअघि अस्पताल र क्लिनिकमा समेत गरी यसका रोगी बढी आएको बताए । विशेषगरी पर्साको पोखरिया नगरपालिका क्षेत्रबाट बिरामीहरु आफ्नो सम्पर्कमा बढी आएको उनले बताए ।
नारायणी अस्पतालका अर्का चिकित्सक एवम् फिजिसियन डा. उदयनारायण सिंहले साताको ३/४ जनासम्म स्क्रम टाइफसका बिरामी आफ्नो सम्पर्कमा आएको बताए । बिरामीहरुमा उच्च ज्वरो, टाउको दुख्ने, शरीर र मांशपेशी दुख्ने, शरीरका विभिन्न भागमा साना र ठूला गरी रातो डाबर आउने जस्ता लक्षण देखिने गरेको उनले बताए ।
प्रयोगशालामा बिरामीको रगत परीक्षण पछि यो रोगको पहिचान हुने उनले बताए । यसको उपचार सस्तो भएपनि समयमा उपचार नपाउँदा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ ।‘डक्सिसाइक्लिन नामक पुरानो र अत्यन्त सस्तो एन्टिबायोटिक औषधि चलाउँदा यसका बिरामी निको हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर समयमै उपचार नपाउँदा बिरामीको ज्यान समेत जान सक्छ ।’
प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ १३:५९
काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको एकलाख डोज फाइजर खोप सोमबार आइपुग्ने भएको छ । १ लाख ६२० डोज फाइजर खोप सोमबारसम्म नेपाल आइपुग्ने अमेरिकी दूतावासले आइतबार जानकारी दिएको हो ।
यसअघि अमेरिकाले जुलाई १२ मा १५ लाख ३४ हजार ८५० डोज जोन्सेन एन्ड जोन्सेन खोप नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो ।
यो एमआरएनए कोभिड-१९ खोप हो । अमेरिकाको फाइजर र जर्मनीको बायोनटेक कम्पनीले यो खोप संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । फाइजर खोप कोरोनाविरुद्ध नेपालमा प्रयोग हुने चौथो खोप हुनेछ । नेपालमा यसअघि एस्ट्राजेनेका, भेरोसेल र जोन्सेन एन्ड जोन्सेन खोप प्रयोग भइसकेको छ ।
अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले फाइजर खोप १२ देखि १५ वर्ष उमेर समूहमा प्रभावकारी हुने जनाएको छ । अन्य अनुसन्धानहरूले पनि यो खोप ९५ प्रतिशत प्रभावकारी हुने देखाएका छन् ।
यो खोपलाई भण्डारण गर्नका लागि माइनस ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रम आवश्यक पर्छ । तर, नेपालमा अहिले भएका खोप भण्डारण गर्ने फ्रिजहरूमा यो क्षमता छैन । फाइजरकै लागि भनेर युनिसेफले नेपाल सरकारलाई एक लाख डोज अट्ने ४ वटा अल्ट्रा कोल्ड फ्रिजर यसअघि उपलब्ध गराएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६० लाख डोज फाइजर खोप खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ १३:५८
धोको पूरा गर्न हेलिकोप्टरमा बिहे